Volavola namboarina ho an'ny zoro ny sisin'ny fanapahana amin'ny lelany miaraka amina tanjaka avo sy asa fanapahana mazava tsara, mamela ny lanezy mihodina eo amin'ny lelany mba hampihenana ny fanoherana ary hahatratra ny vokatra tsara indrindra ho an'ny asa fanamboarana oram-panala.
Volomaso eo aloha
Famolavolana voavolavola ho an'ny zoro amin'ny sisin'ny fanapahana miaraka amin'ny hery avo sy ny asa fanapahana mazava tsara, mamela ny lanezy mihodina eo amin'ny lelany mba hampihena ny fanoherana ary hahatratra ny vokatra tsara indrindra ho an'ny asa fanamboarana oram-panala. Ny zoro miasa faran'izay avo indrindra amin'ny ravina dia 127, izay fisafidianana tsara indrindra ho an'ireo tranokala misy oram-panala.
Mahatratra ny vokany tsara amin'ny alàlan'ny angadin-dranonitra nohatsaraina, fihetsika mora afaka iharan'ny làlan'ny oram-panala samy hafa. Ary ny zoro miasa farafahakeliny dia mety hahatratra 152 °.
Ny fahazoana rohy mahery sy fehikibo mahatratra ny fahaizana mitaky sy mananika tsy manam-paharoa, nifanaraka tamin'ny làlan'ny lanezy.
Ny fiarakaretsaka dia misy seza lohataona-lohataona azo ampiasaina mandritra ny 30 ° mihodina amin'ny ilany havia sy havanana, miaraka amin'ny lever ho an'ny fanitsiana zoro marobe sy ny fanajana ny ergonomika hisorohana ny havizanana amin'ny fomba mahomby.
Ny fampiasana ny fantsom-panafody mahazatra ho an'ny fifehezana, ny fahatsapana fa mikasika ny fahatsapana mazava, ny fandidiana malefaka, mba hanomezana fitaovana fampitaovana mazava kokoa ho an'ny mpandraharaha.
Miaraka amin'ny jiro LED feno sy avo lenta ary rafitra hazavana manan-tsaina, ahafahan'ny masinina ankapobeny ho lasa manintona kokoa, ary fahitana miavaka tsara kokoa ho an'ny asa alina.
Haavony (Anisan'izany ny nify amin'ny làlana) 4300 mm
Max. sakan'ny ravina 5400mm
Max. Sakan'ny angadinomby 6300mm
Ny lanjan'ny vatana lehibe 6926kg
Ny lanjan'ilay lalana 850kg
Ny lanjan'ilay ravina 500kg
Milanja angadinomby 894kg
Milanja milina iray manontolo 9170kg
Taratra fihodinana Pivot Steering
Max. ny fahaizan'ny Kilasy 45 °, 100%
Max. ny hafainganam-pandehanana 18.5km / h
Fahaiza-manao sehatra tena izy 800kg
MODELY QSL 8.9
Max. Torque 1500N.m / 1500rpm
Fanjifana solika 19L / h
Fahafahana solika 260 L
Rafitra famindrana herinaratra hydraulic
Rafitra Hydraulika ho an'ny dia Paompy DAFORS 100cc sy motera
Rafitra Hydraulika ho an'ny angadinomby Paompy DAFORS 75cc.
Seza ho an'ny lehiben'ny mpandraharaha afovoan'ny cab, rivotra-tsindrona, poketra marobe, mafana azon'ny herinaratra.
mpiara-mpandraharaha seza roa ho an'ny mpiara-miasa roa amin'ny lafiny roa.
Seho fizahana Fampisehoana miloko 7 santimetatra.
Fanaraha-maso ny dia miaraka amin'ny fifehezana levera mahazatra.
Fanaraha-maso ny kojakoja Ergonomics, fefy fanaraha-maso rehetra.
Rafitra manazava sy manafana.
Rafitra jiro LED feno
Varavarankely manoloana sy ankilany misy rafitra fanamoriana herinaratra
Rearview fitaratra miaraka amin'ny fanamafisana herinaratra sy fanitsiana
Teo aloha: HBXG-SC360.9 Excavator
Manaraka: SHEHWA-380-DTH Rig fandavahana pneumatika
Miasa ny oram-panala